आफ्नो एटिएम जोगाऊनुस्, ह्याकरको ट्रान्जिट बन्दै छ नेपाल - प्रविधि - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
आफ्नो एटिएम जोगाऊनुस्, ह्याकरको ट्रान्जिट बन्दै छ नेपाल
एटिएमको डाटा र पिन चोरिनबाट यसरी बच्नुहोस्
काठमाडौं, कार्तिक २२
तस्विर, ब्लग कास्परस्काइ
एक वर्षअघि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले एटिएम कार्डको डाटासमेत ट्रान्सफर गर्न मिल्ने ‘मिनी म्याग्नेटिभ स्ट्रिप रिडर राइटर मेसिन’सहित विदेशी नागरिक मेहमत गुलेनलाई पक्राउ गरेको थियो। टर्की स्थायी घर भएका गुलेनले एपेक्स डेभलपमेन्टलगायत विभिन्न बैंकबाट शंकास्पद बैंकिङ ट्रान्जेक्सन गरेका थिए।
उनी पक्राउ परेपछि ब्युरोले नेपाल एटिएम ह्याकरको ट्रान्जिट बनेको जनाएको छ। त्यसको एक वर्ष नबित्दै सिआइबीले नै केही दिनअघि एक बुल्गेरियन नागरिकलाई एटिएम ह्याक गरेर पैसा निकालेको अभियोगमा पक्राउ गरेको छ।
ती नागरिकले डेढ लाख व्यक्तिको एटिएम ह्याक गरेको खुलासा भएको छ। ठमेलबाट पक्राउ परेका डिमो अटानासोभ स्टेफानोभले विभिन्न देशका नागरिकको डेढ लाख एटिएम ह्याक गरेको सिआइबीले पत्ता लगाएको हो। नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकका ग्राहकको एटिएम ह्याक गरेपछि सिआइबीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा उनी ‘अन्तर्रािष्ट्रय एटिएम ह्याकर’ भएको खुलेको छ।
टर्कीका गुलेनलाई ठमेलस्थित कर्मचारी सञ्चय कोषअगाडि एपेक्स बैंक र स्टयाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको एटिएम बुथबाट पैसा झिक्दै गरेका बेला प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। उनले एटिएम ह्याक गरी विभिन्न व्यक्तिको खाताबाट पैसा झिकेका थिए। सीआईबीका अनुसार गुलेनले विदेशी नागरिककै एटिएम को डाटा र पिनकोड चोरी गरी मिनी म्याग्नेटिभ स्ट्रिप रिडर राइटर मेसिनमार्फत स्वीप कार्यमा एटिएमको डाटा ट्रान्सफर गरेर भिसा कार्ड, मास्टर कार्ड र डेबिट कार्ड बनाउने गरेका थिए।
गुलेनले हिमालयन बैंक, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकलगायतका एटिएम मेसिनबाट पैसा निकालेका थिए। त्यसैगरी भिजिट भिसामा नेपाल आएका ह्याकर समूहका अर्का सदस्य रोमानियाका नागरिक अबलियन प्रेडा पनि पक्राउ परे। उनी पनि विदेशी नागरिकको पिन चोरी गरी नेपाल आएर एटिएम बाट पैसा झिकी पुनः फर्कने गर्दै आएका थिए।
उनी सन् २०१५ यता तीन पटक नेपाल आएर रकम निकालेर गएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ। पटक–पटक नेपाल आएर एटिएमबाट रकम निकालेर भाग्न सफल प्रेडालाई प्रहरीले गत साउन १६ मा काठमाठौंको लाजिम्पाटबाट १ सय ४० वटा एटिएम कार्डसहित पक्राउ गरेको थियो। सीआईबीका अनुसार उनी पनि अन्तर्रािष्ट्रय एटिएम ह्याकर समूहका प्रमुख व्यक्ति हुन्।
उनले बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, पेरु, रसिया, इटाली दक्षिण कोरिया, कोस्टारिका, जापान, इन्डोनेसियालगायत मुलुकका नागरिकको एटिएम ह्याक गरी रकम चोरी गर्दै आएको सीआईबीले जनाएको छ।
एक हप्ताअघि मात्रै पक्राउ परेका बुल्गेरियन नागरिकको ल्यापटपमा डेढ लाख व्यक्तिको एटिएम कार्डको डाटा तथा पासवर्ड भेटिएको छ। गोप्य क्यामेरा एटिएम बुथमा जडान गरी उनले पासवर्ड चोरी नक्कली एटिएम बनाएर ठगी गर्दै आएका थिए। ११ कात्तिक बेलुका ठमेलको होटेल जगतबाट निस्किँदै गर्दा उनी पक्राउ परेका हुन्। ‘एटिएम ह्याकका घटना नेपालमा लामो समयदेखि हुँदै आएको थियो तर, यस्तो प्रविधिको ठगी पहिलोपटक पत्ता लागेको हो’ सिआईबीका प्रमुख डिआइजी नवराज सिलवालले बताए।
प्रहरीका अनुसार बुल्गेरियन नागरिक डिमोले एटिएम बुथभित्र सानो आकारको गोप्य क्यामेरा जडान गर्थे। सोही क्यामेराबाट ग्राहकले पैसा निकाल्न डायल गर्ने पिन नम्बर पत्ता लगाउँथे। एटिएम कार्डको डाटा चोर्न उनले एटिएम कार्ड राख्ने स्किमरमा अर्काे एउटा डिभाइस राखेका थिए। कार्डको डाटा र पिन नम्बर पत्ता लगाएपछि उनले ल्यापटपबाट खाली कार्डमा डाटा राख्थे र पिन नम्बर प्रयोग गरी पैसा निकाल्थे।
नक्कली एटिएम कार्ड बनाउने म्याग्नेटिभ स्ट्राइभ रिडर तथा राइटर उनीसँग थियो। त्यसकारण सजिलै उनले नेपालको एटिएम बुथ प्रयोग गरी नक्कली एटिएमबाट पैसा चोर्दै आएका थिए। प्रहरीले उनको साथबाट १७ हजार दुई सय ५० अमेरिकन डलर, ६ सय युरो, हिडेन क्यामेरा, स्किमर, ल्यापटपलगायत सामान बरामद गरेको छ।
१७ हजार डलर बरामद भएकाले उनले एक दर्जनभन्दा धेरै व्यक्तिको नक्कली एटिएम कार्ड बनाएर पैसा निकालेको हुन सक्ने प्रहरीको आशंका छ। प्रहरीले उनको साथबाट २५ वटा नक्कली एटिएम कार्ड बरामद गरेको छ। उनले पैसा निकालेर डलर साटिसकेका थिए। नेपालबाट भाग्न लाग्दा उनी पक्राउ परेका थिए। एटिएमबाट पैसा चोरीकै लागि उनी बुल्गेरियाबाट नेपाल आएका थिए।
०७१ चैत १० पक्राउ परेका रिपब्लिक अफ बुल्गेरियाका पेट्रोस्लाभ रिस्टोभ पनि एटिएम ह्याकर समूहका अन्तर्रा्ष्ट्रिय सदस्य हुन्। उनको पनि काम अरुको जस्तै ह्याक भएका एटिएम बोकेर नेपाल आएर रकम झिकेर फर्किने हो।
प्रहरीका अनुसार यसरी एटिएम ठगी गर्ने धेरै विदेशी हुन्छन्। भिजिट भिसामा नेपाल आउने र केही दिन बस्ने अनि काठमाडौंमा भएका विभिन्न बैंकका एटिएम बुथबाट रकम निकालेर फर्किने उनीहरुको काम हो।
यसरी हुन्छ ह्याकिङ
ह्याकर समूहका सदस्यहरुले विदेशबाट योजना बनाएर नेपाल आउने गरेका छन्। उतैको एटीम बुथमा वेबक्याम राखेको हुन्छ। कतिपय एटिएम भित्रै पिनकोड रिड गर्न सक्ने क्षमताको अर्को डिभाइस राखेर एटिएमबारे जानकारी लिने गर्छन्। प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको तथ्य अनुसार त्यसरी पिन कोडको जानकारी संकलन भएपछि उनीहरू खातावाल व्यक्तिको विवरण भरेर भिसा कार्ड तथा अन्य बिजनेस कार्ड तयार पार्छन्। यसरी तयार पारेको कार्ड प्रयोग गरेर तस्करहरुले बैंकिङ सुरक्षा कम भएका र सहजै आवजावत गर्न मिल्ने देशमा गएर पैसा झिक्छन्।
नेपाल पनि ह्याक भएको कार्डबाट पैसा झिक्न मिल्ने सहज देश भएकाले उनीहरुको मूख्य ट्रार्गेट नेपाल बन्दै आएको छ। सिआइबीका प्रमुख डीआईजी सिलवालका अनुसार पर्यटक भिसामा नेपाल आउने कतिपय विदेशीको धन्दा एटिएमबाट पैसा निकालेर फर्किने मात्रै हुने गरेको छ। उनका अनुसार एटिएमको पिन कोड ह्याक गर्ने एक गिरोह विदेशमै हुन्छ। नेपालको बैकिङ प्रणालीमा राम्रो सुरक्षा नभएकाले ह्याकरको रोजाइमा नेपाल परेको प्रहरीको दाबी छ।
दुई थरी समूह सक्रिय
सीआईबी प्रमुख सिलवालका अनुसार ह्याक गर्नेहरुका दुइ थरी समूह रहेका छन्। एउटा समूह विदेशमै बसेर ह्याक गर्ने अर्को नेपाल आएर पैसा लिएर विदेश जाने। यो समूहले नेपालमा एटिएम ह्याक गरेपछि डलर साटेर लैजाने गरेको छ।
एटिएमबाट निकालेको रकम ६० प्रतिशत मुख्य ह्याकरले हुन्छ भने ४० प्रतिशत एटिएमबाट रकम निकाल्ने व्यक्तिले हुन्छ। पिन कोड ह्याक गर्ने र एटिएम बाट रकम निकाल्नेको प्रायः चिनजान पनि हुँदैन। पिन कोड ह्याक गरी नयाँ कार्डमा विवरण भरेर मुख्य ह्याकरबाट अर्कोको हातमा कार्ड पुग्छ, त्यसपछिमात्र एटिएम मा पैसा झिक्नेको हातमा पर्छ। अनि उनीहरूले भिजिट भिसामा नेपाल आएर रकम निकाल्ने र अमेरिकी डलर वा युरोमा साटेर लाने गरेको सिआइबीले जनाएको छ।
प्रहरीका अनुसार यसरी ह्याक भएका एटिएम कार्ड तीन प्रकारले प्रयोग हुने गरेका छन्। पहिलो, नेपाल तथा भारतका क्यासिनोमा ‘स्वीप’ गरी रकम निकाल्ने। दोस्रो, नेपालीहरूलाई प्रयोग गरी महँगा क्यामेरा, मोबाइल, घडी तथा अन्य इलेक्ट्रोनिक्स सामान अनलाइनमार्फत सपिङ गर्ने। तेस्रो, नेपाल घुम्न आउने बहानामा पर्यटक भिसामा नेपाल आउने र रकम निकाल्नेदेखि होटल तथा रेस्टुरेन्टमा कार्डमार्फत बिल तिर्ने र नेपाली एटिएम बाट रकम निकालेर फर्किने।
एटिएमको डाटा र पिन चोरिनबाट बच्न यी १० उपाय अपनाउनुहोस्ः
१. एटिएम बुथमा पसेर रकम निकाल्नुअघि बुथमा कुनै अस्वभाविक उपकरण, क्यामरा, आदि जोडिएको छछैन हेरेर मात्र कार्ड प्रयोग गरी रकम निकाल्नुहोस्।
२. एटिएम कार्डमा रहेको म्याग्नेटिक स्ट्राइपमा रहेको डाटा चोर्न जेन्युइन कार्ड स्लटबाहेक अरु कार्ड पनि जडान गरिएको हुनसक्छ। यदि त्यस्तो स्लट देखिएमा सो बुथबाट कारोबार नगरी प्रहरी वा बैंकमा खबर गर्नुहोस्।
३. खातामा पर्याप्त रकम छ र तपाईंले सही पिन नम्बर राख्नुभएको छ तर पनि मेसिनबाट रकम निस्किएन भने तपाईंले नक्कली कार्ड स्लटमा कार्ड प्रवेश गराउनुभएको हुनसक्छ। यदि त्यस्तो रहेछ भने तत्काल अर्को बुथमा गएर एटिएम पिन परिवर्तन गर्नुहोस्।
४. एटिएम मेसिनको किप्याड नजिक प्वाल देखिएमा ख्याल गर्नुहोस्, त्यहाँ गोप्य क्यामरा जडान गरिएको हुनसक्छ।
५. एटिएम मेसिनको किप्याड मेसिनमा नमिलेको जस्तो वा अस्वाभाविक लागेमा त्यस्तो बुथमा पिन नम्बर नथिच्नुहोस्।
६. एटिएम पिन नम्बर थिच्दा सावधानी अपनाउनुहोस्। हातले छोपेर पिन नम्बर थिच्नु गोपनीयताको हिसाबले राम्रो हुन्छ।
७. आफ्नो एटिएम कार्ड अरु कसैलाई प्रयोग गर्न नदिनुहोस र पिन नम्बर गोप्य राख्नुहोस्।
८. आफ्नो खाताको कारोबारबारे जानकारी लिन एसएमएस सुविधा लिनुहोस्।
९. आफूले नगरेको कारोबारका बारेमा एसएमएस एलर्ट आएमा सम्बन्धित बैंकमा खबर गर्नुहोस्।
१०. समय–समयमा एटिएम पिन नम्बर परिवर्तन गरिरहने।
प्रकाशित २२ कार्तिक २०७३, सोमबार | 2016-11-07 14:36:37